Portrait izithombe - uhlobo olulodwa ezinzima kakhulu umsebenzi. Iqiniso lokuthi imisebenzi photographer kufanele zihlanganisa nokudluliswa ukuma hhayi amahle kuphela sangaphandle umuntu, futhi into eyinhloko ukukhombisa ezifihliwe, essence kwangaphakathi kanye yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi. Ngakho-ke, akubona bonke ngesithombe ubuso obumamathekayo kungenziwa ngokuthi umbono omuhle.
Ukwakha isithombe kwezobuciko akuyona njalo adinga imishini ekhethekile futhi kuyabiza. Lowo oyinhloko uwukwenza nobuchwepheshe bale umthwebuli wezithombe, umuzwa wakhe futhi ukunamathela iqoqo Imigomo esekelwe phezu kwayo base portraiture.
Umthetho wokuqala. Qiniseka ukuba acabangele yokuthi imodeli akukwazi maphakathi. Isithombe kuyoba zemvelo kakhulu, uma umuntu ukubeka kancane niye kwesokunene noma kwesobunxele. Yiqiniso, kufanele kube khona isikhala esiningi, konke kufanele silingane.
Eyesibili umthetho. Ukudubula portrait inika ezithakazelisa kakhulu, uma wenza i-close-up, okumele hit umuntu, noma ingxenye yayo. Nale ndlela, ungakwazi ukunikeza isithombe ngokomzwelo. Ngokwesibonelo, ukukhathala kuzobekwa obala khona unshaven, ajabule - elikhazimulayo amehlo nokunye.
Umthetho wesithathu. Portrait izithombe akufanele kwenziwe "emabunzini." Imodeli awukwazi ngisho abheke ikhamera. Kunalokho, izithombe ezithakazelisayo kakhulu ngukuthi labo bantu uma into ngomdlandla wahlanganyela, ngifuna ucabangisisa ngale ohlangothini noma umane ukubukela. Okwamanje imodeli zemvelo.
Umthetho wesine. Uhlaka kufanele uthole inombolo okungenani izinto (ifenisha, abanye abantu kanye nezinye izinto). Shiya kudingeka okuthile ohlobene indaba kuphela.
Umthetho yesihlanu. Kakhulu "siyavuka" futhi adlulisele khona isimo esithile ezandleni isihloko. Kungaba imbali, ithoyizi ifoni, isambulela, leaf nokunye. Into esemqoka ukuthi wabheka e uzimele kahle.
Umthetho wesithupha. Yini ebaluleke iyona ukudepha kwenkundla. isidingo ezesabisa ukwenza kuphela portrait futhi ngemuva kufanele anyakaza. Lesi isimiso esiyisisekelo uma kukhona portrait sokudubula ngaphandle.
Umthetho wesikhombisa. Lapho focus Kwenziwa, khona-ke kumelwe abe amehlo, ecacile futhi enembile. Uma usulungile uphendulela nokucija udinga ukubeka izinto ngeso ekamakhelwane wakho.
Umthetho lesishiyagalombili. Lapho uqopha is abulunge Ukwakheka equilibrated. On uzimele kungaba eziningi imvelo (esibhakabhakeni, amahlathi, imifula, nokunye), ngaphandle uma kudingwa ngesakhiwo. Kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi le shot akazange hit lutho olubi ngabanye (izindonga ubudala, amapayipi, udoti kanye nezinye izinto).
Umthetho lesishiyagalolunye. Portrait izithombe kuyoba mnandi, uma amamodeli nje ophoqelelwe ukumamatheka in the ifremu. zemvelo kuphela - isihluthulelo sempumelelo.
Umthetho yeshumi. Uma usuqedile portraiture ke udinga ukugxila kwakhe. Ngisho noma ngemuva kukhona ubuhle ekhexisayo ezintabeni, umthwebuli kufanele ugxile kuphela onobuhle ukuthi wayengadlali ngubani laliyisikhungo esiyinhloko, futhi bonke abanye - kuphela ngemuva.
Umthetho wetshumi lanye. Lapho amathuba atholakalayo ngaphandle kokuba ubonise portrait sokudubula kuphela udinga ukusebenzisa tripod.
Ekuphetheni, kufanele kuqashelwe lokhu okulandelayo. Usebenze njengoba photographer Kunconywa kuphela ukukhanya soft: ekuseni, noma eduze kusihlwa. Ngaphezu kwalokho, ukudubula okuhle sezulu esinamafu ngoba izibani iyunifomu kutawufaka sandla ukulungiselela wasebenza futhi ekumeni esithambile.
Kodwa isikhathi ngeshwa kakhulu emini ngoba ilanga uphakeme, kukhanya kuxhopha kakhulu namathunzi - ezijulile futhi abukhali. Ngakho-ke, umuntu emthunzini ungavula cishe abamnyama. Ukuze ugweme lokhu, kumele zihlanganisa "Gcwalisa flash" Imodi.
Nakuba ngokuqondene nemithetho eyisisekelo portraiture uthole ekhexisayo.